भाइटीकाको महत्व के छ ? (भिडियोसहित) - Naya Patrika
भाइटीकाको महत्व के छ ? (भिडियोसहित)
यस वर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत शुक्रबार ११:५५ बजे रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति जनाएको छ । तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् कात्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन भाइटीका मनाइन्छ । भाइटीका दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई र दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई विशेष सम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजाआजा गरी मनाइन्छ ।
भाइटीकामा विभिन्न मिष्ठानसँगै दान–दक्षिणा एवं वस्त्र लगायतका सामाग्री दिने पनि परम्परा छ । परापूर्वकालमा बहिनी यमुनाले दाजु यमराजलाई विशेष मानसम्मानका साथ भाइटीका लगाइदिएको किंबदन्ती छ । यमपञ्चकका पाँच दिन यमराजले यमुनाको घरमा बास गर्ने र यही बेला दश दिक्पालले बलीराजालाई आफ्नो राज्य छाड्ने धार्मिक मान्यता छ ।
भाइटीकामा दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी ओखर, तेल, मखमली, सयपत्री फूलको माला, दूबो, कटुसलगायत प्रयोग गरी आफ्ना दिदी बहिनी र दाजुभाइको सुख–समृद्धि, अरोग्य एवं दीर्घायुको कामना गरिन्छ । भाइटीका लामो समयसम्म भेटघाट नभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग भेटघाट हुने माध्यमका रूपमा लिइन्छ । दिदीबहिनी भाइटीकाको अघिल्लै दिन दाजुभाइलाई भाइटीकाको निम्तो दिन्छन् ।
भाइटीकाकाे महत्वबारे पण्डित तथा ज्याेतिष हरिप्रसाद दाहाल यसाे भन्छन् :
#उत्तम साइत #भाइटीका